PressReader - Zululand Eyethu: 2017-11-23 - ITHEMBA NGE-ONE STOP SHOP
ITHEMBA NGE-ONE STOP SHOP
UMENGAMELI Ja­cob Zuma uthi un­ethemba lokuthi uku­vulwa kwe­sikhungo es­isha se­zokuh­weba ku­zok­wenza kube lula ukuthi abat­shali zi­mali aba­nentshisekelo baqale am­ab­hizin­isi ngokushe­sha KwaZulu-Natal. Ukusho lokhu nge­sikhathi ku­vulwa ngokusem­theth­weni lesikhungo ngo Mgqi­belo e-Inkosi Al­bert Luthuli Con­ven­tion Cen­tre eThek­wini. Loku­vulwa nokuthathwa njengegxathu elibalulek­ile bekuhan­jelwe iphini likaNgqongqoshe we­zoHwebo nezez­iMboni uBule­lani Grat­i­tude Mag­wan­ishe, uN­dunankulu waKwaZulu-Natal uWil­lies Mchunu, uMphathiswa we­zokuThuthuk­iswa kwe­zoMnotho noKongiwa kweMvelo uSihle Zikalala kanye neMeya yeTheku uZandile Gumede.
UZuma uthe lesikhungo siy­ingx­enye yohlelo lukahu­lu­meni lokunx­enxa abat­shali bez­i­mali ukuthi baqale am­ab­hizin­isi. “Sib­hek­ile ukuthi kun­gene am­ab­hizin­isi amasha kule­si­fun­dazwe kuthi abat­shali zi­mali abakhona njenga­manje ban­dise am­ab­hizin­isi abo ngoba lokho ku­zo­dala am­ath­uba emisebenzi okuy­into edingeka kakhulu kule­si­fun­dazwe nasezweni lonke,” kusho uZuma. Uqhube wathi uhu­lu­meni uyakuqonda ukuthi abat­shali zi­mali bavula am­ab­hizin­isi en­daweni lapho kunoz­inzo khona. Ngaphan­dle kom­nyango we­zohwebo loluh­lelo luban­dakanya iSouth African Rev­enue Ser­vices, abakwa-Home Af­fairs, um­nyango wez­abasebenzi , owe­zokongiwa kwemvelo kanye nezinye iz­inhlaka zikahu­lu­meni ne­zom­buso. Lokho kusho ukuthi uma kunenkam­pani en­esi so sokuqala ib­hizin­isi izok­wazi ukuthola lonke usizo ngoku­vakashela lesikhungo esiseTrade and In­vest­ment KZN,eThekewini. Ngokusho kukaZuma os­ekusele ukuthi iz­inhlaka zonke ziseben­zisane.
“Ukuseben­zisana kwez­inhlaka zikahu­lu­meni kusuka kuhu­lu­meni wasekhaya, owe­si­fun­dazwe kanye nokazwelonke kubalulek­ile futhi kun­gaqinisek­isa im­pumelelo yaloluh­lelo,” kusho uZuma. Ngokusho kukaZikalala uk­wethulwa kwaloluh­lelo kusho ukuthi im­i­danti em­i­ningi ethinta am­ab­hizin­isi isi­zophela noku­zok­wenza iKZN ukuthi ibe yin­tan­dokazi ku­bat­shali zi­mali nokuy­oqinisek­isa uku­dalwa kwa­math­uba emisebenzi nokuthuthuka kom­notho we­si­fun­dazwe.
UMengameli Ja­cob Zuma evula ngokusem­theth­weni isikhungo es­i­zok­wenza kube lula ukuqala am­ab­hizin­isi ku­bat­shali zi­mali KwaZulu-Natal.